Manampy Ireo Fianakaviana Ao Goatemalà Hikaroka Ny Olon-tiany Nanjavona ny “Tetikasa Fifindra-monina” · Global Voices teny Malagasy
Manampy Ireo Fianakaviana Ao Goatemalà Hikaroka Ny Olon-tiany Nanjavona ny “Tetikasa Fifindra-monina”
Voadika ny 29 Mey 2016 7:07 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Español, Ελληνικά, English
Nikatsaka fanampiana avy amin'ny Tetikasa Fifindra-monina i Manuel taorian'ny naharatran'ny zanany vavy noho ny lozam-pifamoivoizana raha niezaka hihazo an'i Etazonia. Tompon'ny sary: Amy Bracken
Tao amin'ny PRI.org ity lahatsoratra nosoratan'i Amy Bracken ity no nivoaka voalohany tamin'ny 5 May 2016, ary naverina navoaka eto noho ny fifanekena amin'ny fizaràna vontoaty.
Isam-bolana, mandefa sesintany lehilahy, vehivavy ary ankizy an'arivony any Goatemalà i Etazonia. Kanefa maro no mbola tonga, na farafaharatsiny miezaka. Maro ireo mitsoaka vohitra mitokana izay simban'ny herisetra nandritra ny disadisa mitam-piadiana niseho tao amin'ny firenena am-polony taona mahery lasa izay, ka mijaly amin'ny lafiny toekarena ankehitriny.
Nitatitra ny kômision'ny fahamarinana ao Goatemalà fa ny ankamaroan'ny tanàna Maya ao Zacualpa, any amin'ireo vohitra avo any avaratra, dia nitranganà famonoana foko tanatin'ireo taona 1980. Maro tamin'ireo mponina no nitsoaka tamin'izany. Ary ankehitriny, any amin'ny sasan'ireo manodidina an'i Zacualpa, saika efa ho am-pahadimin'ny olon-dehibe mponina any an-toerana no nifindra any avaratra, mikatsaka fiainana tsara kokoa.
Any Zacualpa, maro ireo mponina tsy mahatohitra ny lalaom-bola: mindram-bola ary manarama mpanondrana an-tsokosoko vola mitentina arivo dolara mahery mba hitondra anao hamaky an'i Meksika mankany Etazonia. Mety hotafita ianao ary hahazo asa, ka handefa vola, izay tena ilaina, any amin'ny fianakaviana any an-tanindrazana. Na mety tsy hahomby — halefa sesintany, ary hiafara any Zacualpa ihany, saingy ho ratsy kokoa nóho ny teo aloha ny fiainanao.
Na mety tsy ho hita popoka ianao.
Raha izay no mitranga, mety hakany amin'ny fikambanan-drelijiozy ao ambadiky ny Fiangonan'i Zacualpa ny fianakavianao, izay misy birao kely iray ahitàna marika amin'ny taratasy milaza hoe “Migration Project” (Tetikasa Fifindra-monina). Hetsika nataon'ny an an-toerana izy io, fa tohanan'ny any ivelany— avy amin'ny ivon-toerana misahana ny zon'olombelona any amin'ny Anjerimanontolon'i Boston any amin'ny fanjakan'i Massachusetts, Etazonia.
Miasa eto i Luisa Hernández Simaj. Milaza izy fa mikaroka ireo olon-tiany, izay nankany avaratra, ny ankamaroan'ireo olona tonga mijanona eto.
“Voamarikay fa tsy milaza ny mombamomba azy ry zareo,” hoy izy, “toy ny hoe, ‘María ny anarako, na Juana ary avy any amin'ny vondrom-piarahamonina izato aho na izatsy’. Ny zavatra voalohany teneniny dia hoe, ‘Mikaroka ny havako nifindra-monina aho.’”
Miasa ho an'ny Tetikasa Fifindra-monina i Luisa Hernández Simaj, manampy ireo fianakaviana mamantatra ny misy ireo olon-tiany any Etazonia ary koa manohana ireo olona izay tsy tafita ka niverina an-tanindrazana miaraka amin'ny trosa. Tompon'ny sary: Amy Bracken
Fantatr'izy ireo fa afaka mampiasa fitaovana iray mahery vaika i Hernández Simaj: ny vohikala fijerena ny toerana misy ny tolotra Fifindra-monina any Etazonia sy ny Fanamafisana ny Fomban-drazana. Apetrany ao ny anaran'ilay nifindra monina, ny firenena niaviany sy ny daty nahaterahany. Indraindray tonga dia mipoitra ny toerana misy azy ireo. Indraindray kosa tsy misy na inona na inona, izay mety hidika fa notenenin'ilay mpanondrana an-tsokosoko tsy ampiasa ny tena anarany izy. Araka izany dia mameno taratasy miaraka amin'ny mombamomba ilay mpifindra monina i Hernández Simaj, ary mandefa izany any aminà mpampanoa lalàna ao amin'ny Anjerimanontolon'i Boston, izay manamarina miaraka amin'ireo tambanjotranà mpampanoa lalàna fantany manerana an'i Etazonia raha misy olona afaka mamantatra ny misy io olona io.
“Akory ny hafalianay rehefa mahita vokany izahay,” hoy i Hernández Simaj, “ny fahitàna fa any am-ponja izy. Eto izy. Fantatry ny fianakaviana fa hody izy. Tsy hay hoe rahoviana. Fa hody an-trano izy.”
Mahatsiaro maivana satria ny tahotra ratsy indrindra dia ny fahafatesan'ilay olon-tiana.
“Aty Zacualpa, manana tranga efatra momba ny fanjavonan'olona izahay,” hoy i Hernández Simaj. Teo amin'ny efatra ka hatramin'ny 15 taona teo izao no nanjavonan'izy ireo.
Ary eo ihany koa ilay tranga mampalahelo mahazo ny fianakavian'i Manuel. Volana vitsy lasa izay no nankaty amin'ny birao voalohany indrindra io mpamboly 67 taona io, efa nahafantatra ny toerana misy ny zanany vavy sy ny zafikeliny. Niharan'ny lozam-pifamoivoizana tany Meksika izy ireo. Tsy voafehin'ilay mpanondrana an-tsokoroko ny fiarany raha niezaka nitsoaka manam-pahefana izy. Vao nahatsiaro tena ny zanak'i Manuel amin'zao, ary maty tamin'izany kosa ny zanany lahikely 8 taona.
Tonga hitsidika ny fianakaviana i Hernández Simaj.
Amin'ny fampiasàna ny fifangaroan'ny teny Quiché Maya sy ny Espaniola, mangataka an'i Manuel mba hitantara ny fiainany i Hernández Simaj.
Taona maro lasa izay, hoy i Manuel, no nankanesan'ny vadin-janany tany Etazonia hitady asa hanohanana ny fianakaviana. Tokony nanaraka azy ny vadiny sy ny zanany, saingy tsy nisy izany.
Voasakan'ny Mpisafo Sisintany ao Etazonia ny ezaka voalohany. Tamin'ny ezaka faharoa, nitranga iny lozam-pifamoivoizana iny. Rehefa nahazo ireo vaovao i Manuel, dia nangataka fanampiana tamin'ny Tetikasa Fifindra-monina. Niara-niasa tamin'ireo fiangonana tany Meksika ireo mpiasa mba hikarakarana ny zotra ahafahan'ny zanany vavy mody, miaraka amin'ny sisan'ny zafikeliny.
“Raha tsy teo ny fiangonana”, hoy i Manuel, “adinoy izany rehetra izany.”
Miverina any amin'ny tokotanin'ny fikambanan-drelijiozy indray, eo ivelan'ny biraon'ny Tetikasa Fifindra-monina, misy mpila vonjy iray hafa, dia i Luis, 21 taona. Amin'ny lafiny iray, tsara vintana izy. Tsy maty fo aman'aina tanatin'ireo ezaka telo ahatrarany an'i Etazonia. Tanatin'ireo, voasambotry ny Mpisafo Sisintany foana izy. Tamin'io ampahan'ny tantarany io dia nofenon-drano be loatra izy ka nihato kely nandritra ny fotoana fohy.
Na izany aza, na ratsy tahaka ny inona aza ny zava-niainany tamin'ilay ezaka voalohany, taorian'ny nandefasana sesintany azy indray mandeha, dia milaza izy fa, “rehefa mieritreritra an'ilay trosa ianao, dia te hiverina ka hanandrana indray, ary hanadino ny zavatra rehetra niseho taloha.”
Niezaka hihazo an'i Etazonia in-telo i Luis ary isak'izany dia voasambotry ny Mpisafo Sisintany ka nalefa sesintany. Ankehitriny dia nody an-tanindrazana izy, miady amin'ny trosa navondrony raha niezaka hihazo an'i Etazonia. Tompon'ny sary: Amy Bracken
Nanam-paniriana ny hanohana ny fianakaviany iz. Tsy izay anefa no nisy fa voatery nivarotra tanindrazana izy mba hamerenana ny trosa miaraka amin'ny zanabola.
Tamin'izany dia ny fianakaviany no tonga tao amin'ny Tetikasa Fifindra-monina hijery ny misy azy. Amin'izao dia izy indray no tonga eto.
“Manampy ny firesahana amin'ireo mpiasa eto,” hoy izy. Ao anatin'ny vondrom-piarahamonina, “ny zava-mitranga dia menatra iresaka momba ny tsy fahombiazany ny olona iray.”
Mahita izany foana i Hernández Simaj. Milaza izy fa tsy miresaka ny olona noho ny hirifiry aterak'ilay trosa, fa koa “tsy vitan'izy ireo ny nisedra izany ka nanatanteraka ny “nofinofy Amerikana.”